DCS SERIES DIGITAL WORLD Qabille UXISABSANYAHAY
DCS SERIES DIGITAL WORLD Qabille UXISABSANYAHAY sano 3 4 bilood ka hor #411
UXISABSANYAHAY DIGITAL WORLD Qabille
Dagaalka Digital Qabille World (DCS World) waa dagaalka digital ah free-ka-ciyaar, oo diiradda saaraya istuuray diyaarad military. Waxaa ka mid ah a FREE TF-51D iyo diyaarad weerar Su-25T.
DCS World 2 u baahan DCS: Imtixaanka Nevada iyo Tababarka Range (NTTR) module dhul, oo ay ku jiraan boos ugu weyn jiidda hawada iyo dhulka heli karo mustaqbalka hawlgallada ciidamada nabadda adduunka oo lacag la'aan ah. The dhulka NTTR ka mid ah hababka metelay difaaca hawada, airbases ku majaajiloodaan, iyo dhowr safafka bartilmaameedka. NTTR ayaa waxaa sidoo kale loo isticmaalaa baaritaanka nuclear. Maanta, waxa ay hoy u tahay RED CALANKA iyo layliyo kale oo ciidan oo ay ku jiraan dalalka oo dunida ku baahsan. map NTTR ee DCS World 2 ka mid ah Nellis AFC, Creech AFC, Airport International McCarran iyo faragelintii aroos Lake AFC (aka Area 51). map Tani waxay sidoo kale waxaa ka mid ah magaalada ka mid ah Las Vegas, Airport International McCarran, iyo Hoover Dam.
Kulligiin ka wada arag Nellis AFB oo loogu talagalay Hawlgalka 'Red Flag Gentelmen'!
The M-2000C waa a multi-doorka, Faransiis-loogu talagalay, 4th jiilka dagaalka. Waxaa la qorsheeyay in 1970s sida dagaalka ah miisaanka yar oo ka badan 600 diyaaradaha M-2000C ayaa la dhisay. The M-2000C waa dagaalyahan-hal engine a garabka Delta low-set Doono ah la lahayn dabada siman. Waxa uu dhaqaajinta fiican siiyey ay xasiloonida dabacsan iyo duuli-by-silig nidaamka gacanta horyaalka. The M-2000C sidoo kale waxaa ka mid ah radar RDI multi-hab ah in uu yahay raadraaca awood iyo bartilmaameedyada mashquuliya ee ka baxsan safafka muuqaal ah. Waxa intaa dheer in lug diyaarad kale oo madfac iyo gantaalaha, ee M-2000C sidoo kale galaan kartaa bartilmaameedyada dhulka la madfac, gantaallo iyo bambooyin. The M-2000C waa taam kaamil ah ee dagaalka ee DCS World!
The F-5E waxaa la sameeyey by Northrop Corporation in 1970s hore. The dagaalka taatikada nuur yahay version ah la casriyeeyay oo ku salaysan horumarka hore F-5A. The F-5s 'dagaal doorka koobay Fadilmo hawada, taageero dhulka, iyo weerar dhulka. Marka la eego ay dabacsanaan shaqada, xasilloonaan hawlgalka, iyo qiimo jaban, Tiger II wuxuu leeyahay, iyo sii wadaan in ay u adeegaan, ciidamada hawada adduunka oo dhan.
The F-5Е hub la laba cannons 20-mm М39-А3 la 280 kulminna per madfac kasta. cannons waxaa ku yaalla qaybta sanka, weeraryahanka of qol ah. deflectors Gaarka ah waxaa loo isticmaalaa si looga fogaado xaaladaha edegga kombaresarada sababa qofku gaas u kulul yihiin sida a bi-saarka ah ee ka hawlgala ee M-39-A3. madfac kasta waa awoodaa rasaas at heerka of 1500 in 1700 kulminna halkii daqiiqo.
wingtip kasta oo lagu daro rail Launcher a awood rasaas AIM-9 gantaalo infrared-ka lagu hago.
Shan dhibcood adag (mid pylon centerline iyo afar pylons underwing) ogolaan diyaaradda si ay u fuliyaan noocyada kala duwan ee hawada-to-dhulka hubka (bambooyin, naafaysa, iyo gantaallo) pounds 6,400 (oo ku saabsan 3000 kg) ee guud ahaan. Intaa waxaa dheer, rasaas Nuur oo xamuul weelasha lagu lifaaqi karaa. Si loo kordhiyo muddada duulimaad oo kala duwan, Haamaha Shiidaalka dibadda lagu lifaaqi karaa sadex dhibcood adag (pylon a centerline iyo laba pylons kariska). Dhaqaajinta iyo xawaaraha la gaarsiiyaa karaa dagaal by jettisoning oo dhan dukaamada dibadda.
F-15 Eagle | At xadka
The F-15 ayaa badanaa lagu tilmaamay sida diyaaradaha ugu weyn Maraykanka dagaalka ka 1970s ilamaa qarnigii hore 21st. The F-15C waa dagaalyahan daahir qaab aad u fiican, waxaana uu dhaliyay in ka badan 100 hawada-to-hawada guul la'aan ka cabanaya wax khasaare xaqiijiyay. The DCS ololaya dabna F-15C ka mid ah model heerka duulimaadka xirfadle, a darajo 6 faahfaahsan oo ku saabsan xoriyadda qol awood, model aadka sax dibadda iyo dhawaqyada.
Sida horyaalka DCS ololaya dabna ah, F-15C diiradda saarayaa fududaato in la isticmaalo oo aan is dhexgalka qol adag, si weyn u yareeyo qalooca waxbarashada. Sida oo kale, F-15C qoreysa keyboard iyo qol joystick fari iyada oo diiradda la on mission ugu muhiimsan ee nidaamka qol.
DCS: A-10C Warthog waa jilidda PC ee diyaaradda weerarka US Premier Support Close Air a. Tani waa diyaarad labaad ee taxanaha DCS, ka dib markii DCS: Black Shark, iyo kiciyo bar ka sii sareeya ee taxanaha DCS. Warthog keentaa istuuray PC ugu macquul ah ee go'an casri ah garabka diyaaradaha dagaalka ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa horyaalka, hage, dareemayaal, iyo nidaamyada hub.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.172